Pakati pemapurojekiti mazhinji atakagadzirira vatengi vedu, takashanda nevanhu vanoshamisa; avo vaibva kwakasiyana nzanga - maartist, mamaneja eprojekti, varapi, vaimbi vekuzvivaraidza uye vafotori. Aya mapurojekiti angave ave azere-nguva kubatanidzwa kwevatengi vedu kana hombe sosi yekungoita mari. Isu tinobatana nevanhu vamwe navo kuvabatsira kuvaka zvigadzirwa zvavo kubva pakutanga, vachishandisa NewGenAppsbhizinesi uye tekinoroji kugona.
Isu hatinetseke nekugadzira vatengi. Asi, isu tinonetsekana nekuwana Partner. Isu tashanda nekuwanda kwekutanga mukuvaka MVPs, mamwe acho akaenderera nekuwana hombe bhizimusi mari. Isu tinonzwisisa zvido nezvinetso zvekutanga uye tinoshanda padhuze sevadyidzani kutsanangura yavo yakazara chigadzirwa zano. Isu tinopa inoenderera chigadzirwa manejimendi - timu yedu inogona kuendesa app kutanga mhedzisiro nekukurumidza uye inoshanda
Isu tinokubatsira iwe mukugadzira yako gore uye nzira yekufamba, dhizaini mhinduro uye kuendesa maapplication ezvaunoda zvebhizimusi. Isu tinonzwisisa kuti chengetedzo, mhando uye mashandiro akakosha kana zvasvika mukugadzira maapplication ebhizinesi. Isu tinogadzira yakagadziriswa bhizinesi mhinduro zvinoenderana nevatengi vedu 'uye avo indasitiri zvinodiwa.